Dusit Thani College တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များ သင်ကြားနိုင်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ Dusit Thani College တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်၊ Culinary Arts ဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိထားသလို Hospitality and Culinary Arts သင်ကြားပို့ချမှု အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs) ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Dusit Thani College(DTC) မှာ Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Hotel and Resort Management (Certified by Ecole Hôteliere de Lausanne (EHL) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Professional Culinary Arts (Joint Program with Le Cordon Bleu) တို့ကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး မြန်မာဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူတွေ၊ GCE ‘O’ level (သို့) GCSE ပြီးထားသူတွေ အနေနဲ့ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ကျောင်းဖွင့်ချိန် နဲ့ သြဂုတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွေကို စတင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်နှစ် ပျမ်းမျှစာသင်စရိတ် အနေနဲ့ ကန်ဒေါ်လာ ၈,၉၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ပညာအရည်အချင်း ထူးချွန်သူတွေအနေနဲ့ ASEAN, China and India Development Scholarship, General Prem Tinsulanonda Scholarshipနဲ့ Thanpuying Chanut Piyaoui Scholarship တွေကိုပါ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ သင်ယူခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို CROWN Education ဖုန်း – ၀၉၉၆၅၀၈၅၁၈၅ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။